ईश्वरहरूले ब्रह्मांडको अस्तित्वको लागि कसरी खाता बनाउन सक्छन्, वा अस्तित्व नै?
साम्राज्यले ब्रह्मांडको उत्पत्ति वा अस्तित्व पनि वर्णन गर्न सक्दैन।
प्राविधिक रूपमा बोल्दै, यो कथन सत्य हो: ईश्वरीय ब्रह्मांडको उत्पत्ति वा अस्तित्वको प्रकृति पनि वर्णन गर्दैन। त्यसैले यदि यो सत्य हो, किन यहाँ एक मिथकको रूपमा व्यवहार गरिएको छ? "मिथक" भागमा आउँछ किनभने जुनसुकै कुरा हो यो यो अनुपयुक्त हो कि जुनसुकै चीजको रूपमा अहिंसाको वर्गीकरण गरिन्छ जुन ब्रह्मांड र सबै अस्तित्वको व्याख्या गर्न अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ।
यो यस प्रकार एक पार्थिव हो किनकि कुन हतियारको गलत धारणा हो , कुन पार्थिवहरूले विश्वास गर्छन्, र कुन हतियार गर्नु पर्छ।
अहिंसा र उत्पत्ति
जो लोग कल्पना गर्नुहुन्छ कल्पना गर्दछ कि ब्रह्माण्ड वा अस्तित्व को प्रकृति को व्याख्या गर्न को लागी सामान्यतया दर्शन, धर्म, विचारधारा, वा केहि चीज को रूप मा नैतिकता को उपचार गर्न को वर्ग मा छ। यो सबै ठूलो गल्ती गलत छ - देवता देवताहरुमा विश्वास को अभाव को वाहेक केहि या कम केहि छैन। आफैले, त्यो केवल अविश्वास मात्र ब्रह्मांडको उत्पत्तिको व्याख्या गर्न असक्षम छैन, तर यो पहिलो स्थानमा यस्तो कार्य गर्न अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
के कसैले एल्व्समा कष्टको आलोचना गर्ने प्रयास गर्छ किनकि यसले व्याख्या गर्दैन कि ब्रह्माबाट आएको छ? के कुनै विदेशी अपहरणमा दोषको आलोचना गर्न को लागी प्रयास गर्दछ किनकि यसले व्याख्या गर्दैन किन कि कुनै कुराको सट्टा केहि छैन? निस्सन्देही होइन - र जो कोहीले पनि प्रयास गरिसकेका थिए।
उस्तै टोकनद्वारा, निस्सन्देह, आफैलाई पनिवादले पनि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति जस्ता चीजहरूको व्याख्या गर्न आशा गर्नुपर्दैन। केहि को मात्र अस्तित्वले विश्वव्यापी किन हो किनकि कुनै पनि जानकारी प्रस्ताव गर्दैन। यसको लागि, एक व्यक्ति को केहि विशेष ईश्वर (जस्तै ईसाई धर्म) को सन्दर्भ मा केहि विशेष ईश्वर (जस्तै एक निर्माता ईश्वर) मा विश्वास हुनेछ।
विश्वास र विश्वास प्रणाली
सतावट र धर्मनिरपेक्षता खोज्नुको सट्टा, जुन विश्वास प्रणालीहरूको मात्र तत्वहरू छन्, व्यक्तिहरूलाई बिलोको रूपमा प्रणाली हेर्न आवश्यक छ। एक तथ्य यो थाहा छ कि माथिको मार्थाको दोहोर्याउने व्यक्तिले सेब र संतको तुलनामा अनुपयुक्त छ: जटिल जटिल यथार्थवादी धर्मको सुन्तलासँग मात्र स्याहारको सेब। प्राविधिक रूपले, यो स्टाउ मानव तार्किक फलामेसीको उदाहरण हो किनभने विशेषज्ञहरूले यसलाई चित्रण गरेर अस्तित्वबाट टाढा टाढा म्यान सेट अप गर्दै छन्। सही तुलना केहि अहिष्कार धारणा प्रणाली (चाहे धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष) एक आस्था धारणा प्रणाली को विरुद्ध हुनु पर्छ (शायद धार्मिक, तर एक धर्मनिरपेक्ष एक स्वीकार्य हुनेछ)। यो बनाउन को लागी एकदम अधिक कठिन तुलना हुनेछ र यो लगभग निश्चित रूपले फेब्रुअरी निष्कर्षको लागि नेतृत्व गर्दैन कि हतियार प्रस्ताव गर्न केहि छैन।
ईसाई धर्मको साथमा यो कुरा तथ्य हो कि ईश्वरीय मिथकहरूको आधारमा यो एक महत्त्वपूर्ण समस्या हो: ईसाई धर्मले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिलाई "समझा" गर्दैन। मानिसहरूले स्पष्टीकरण बुझेका छन् - यो "ईश्वरले गर्नुभयो," भन्नाले बरु नयाँ, उपयोगी, र परीक्षण योग्य जानकारी प्रदान गर्दैन। "परमेश्वरले गर्नुभयो" एक व्याख्या होइन जबसम्म यसले परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने बारे जानकारी समावेश गर्दछ, परमेश्वरले कसरी गर्नुभयो, र अधिमानतः पनि किन ।
मलाई आश्चर्य छ कि यो सबै हुन सक्छ किन यो कुनै धार्मिक विचारधारा देख्न को लागि यति दुर्लभ छ - लगभग संधै ईसाईहरु - वास्तव मा यस्तो तुलना गर्ने। मलाई ख्रीष्टियन देख्न कहिल्यै सम्झन सक्दिन। ईसाई धर्म र आस्तिक बौद्ध धर्मको बीच वा ईसाई धर्म र धर्मनिरपेक्ष मानववादको बीचमा, जुन त्यस्तो विश्वासयोग्य प्रणालीहरू ब्रह्मांडको उत्पत्तिको लागि खातामा असक्षम हुन सकेन। यदि तिनीहरूले गरे भने, तिनीहरू केवल नैतिकताबाट टाढा नबिर्सने बाध्यता गर्नेछन्, तर उनीहरूले के खोजिरहेका छन् प्रदान गर्न आफ्नै धर्मको विफलता संग सामना गर्नेछ।
यद्यपि यो असहज र अहिंसालाई निस्काउन असम्भव बनाउनेछ।
पुष्टिकरण पूर्वाग्रह: तर्क र तर्कहरूमा दोषहरू
Abiogenesis र Evolution
धर्म 101: धर्म र धार्मिक विश्वासहरूको प्रकृतिको जाँच
समान अधिकार बनाम विशेष अधिकार
जंक डीएनए इभोल्युशन को लागि जैव रसायन शाहरुख कसरी छ?
भगवान मरिसकेको छ: नित्स्सी डाइटलाई मारेर
चीनी बाउलका विजेता विजेता
जापानमा भोजनालयमा सही कुरा कसरी बोल्न सिक्नुहोस्
व्हील समाप्त हुन्छ: क्रोम
ताल धारा के हो?
तपाईंले पोकर चिप्स किन्नु अघि
नील आर्मस्ट्रांग उद्धरण
कोलिन क्यापर्निकको नेशनल गान प्रोटेस्ट कस्तो आलोचना भयो यो गलत
इतिहास का एल्विस: 1960
प्रश्नहरू एक वकील भर्ती गर्नुअघि सोध्न
ट्रैविस वाल्टन अपहरण, 1975
याकूब: इस्राएलका 12 जनजातिहरूको बुबा
बेस्ट साइकॉम तलाक
अर्लहम कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
क्रिकेट र क्रिसमस चार्प र गाईजस्तै क्यारेक्टरहरू कसरी
अमेरिकामा सबैभन्दा उच्च पिकहरू
यस रिपोर्ट को बारे मा जानकारी दिनुहोस किनकी एक संयुक्त राज्य अमेरिका को लागि
फ्लप शट के हो?
मानव शरीर को रासायनिक संरचना
म्याकाले कल्किनलाई आयु 34 मा भेटियो। यो एक होक्स हो!
एम्पाथ के हो?